MyanCare | ပြောစကားနားမထောင်ပဲ အမြဲဂျီကျ နေတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေရှိနေလို့ စိတ်ညစ်နေရပြီလား?
ပြောစကားနားမထောင်ပဲ အမြဲဂျီကျ နေတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေရှိနေလို့ စိတ်ညစ်နေရပြီလား?
by myatlynn | Aug 11, 2020 | ကလေးကျန်းမာရေး
မေမေတို့ရေ… ပြောစကားနားမထောင်ပဲ အမြဲဂျီကျ နေတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေရှိနေလို့ စိတ်ညစ်နေရပြီလား?
အရမ်းဂျီကျတတ်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေကို ပြောစကားနားထောင်လာအောင် သတိထားပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးဆိုတာဂျီကျတတ်တာ သဘာဝဖြစ်လို့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေမပြုလုပ်ဖို့တော့ အရေကြီးပါတယ်နော် မေမေတို့ရေ။
စိတ်အလိုမကျ ဖြစ်ပြီး ဂျီကျတတ်ကြတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတို့ နူးနူးညံ့ညံ့ ဆက်ဆံပေးဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ သားသားမီးမီး လေးတို့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလည်း သိရှိနားလည်အောင် မေမေတို့က ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကို သိရှိမှ ဂျီမကျအောင်ထိန်းရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သားသားမီးမီး တို့ကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တတ်အောင်လည်း မေမေတို့က လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသင့်ပါတယ်။ ဂျီမကျရင် သားသားမီးမီး တို့လိုချင်တဲ့ ပျော်ရွင်စရာပြုလုပ်ပေးတာမျိုးတို့ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးလေးတို့ရဲ့ စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီး နွေးနွေးထွေထွေ ဆက်ဆံပေးပြီး ဂျီကျနေတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတို့ကို လိမ္မာပြီး မေမေတို့စကားနားထောင်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်လိုက်ပါ။